‘कामदार समस्या विकराल; काम पाउनेले गर्दैनन्, कामबिहीन सयौं’ - UrjaKhabar ‘कामदार समस्या विकराल; काम पाउनेले गर्दैनन्, कामबिहीन सयौं’ - UrjaKhabar
‘कामदार समस्या विकराल; काम पाउनेले गर्दैनन्, कामबिहीन सयौं’
काठमाडाैं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिन नदिन चैत ११ गतदेखि देशभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको छ । लकडाउन भएको ३८ दिन पुगिसकेको छ । आजसम्म देशका हरेक आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त र धेरै त बन्द भइसकेका छन् । लकडाउनले अन्य क्षेत्रसँग जलविद्युत क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ ।
अहिले करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । सरकारले निर्माण सुचारु गर्न सकिने घोषणा गरे पनि स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्री तथा कामदार अभाव, विष्फोटक पदार्थ नहुँदा काम सुचारु हुन नसकेको प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । केही आयोजनामा थोरै कामदारबाट निकै सुस्त काम भइरहेको छ । यिनै विषय समेटेर ऊर्जा खबरले केही प्रवर्द्धकहरूको धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
जलविद्युतमा ऋण र स्वपुँजी अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
मोतिलाल दुगड, अध्यक्ष, एमभि दुगड समूह
निर्माण सामग्री ढुवानीमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेकै छ । फ्याक्ट्रीबाट सामान लोड भइरहेको छ । तर, खुला वातावरण नहुँदा प्रभावित हुने नै भयो । आयोजनास्थल सुरक्षित भए पनि कामदारले काम गरिरहेका छैनन् । घर जाने मात्र भन्छन् । दुई सय जना त गइसके । सरकारको सहयोग भए पनि काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।
यो वर्ष छिटो मौसम सुरु भयो । आयोजनास्थलमा निरन्तर पानी परिरहेको छ । यही कारण पनि काम हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, सरोकारवाला सरकारी निकायले प्रभावकारी सेवा दिइरहेका छैनन् । समन्वय अभाव छ । यसो भएन भने सुचारु भएको काम पनि रोकिन्छ । निर्माणसँगै अब दीर्घकालीन असरलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ ।
अब सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंक ब्याज र लगानीको हुनेछ । हरेक आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण दिने कुरा हुँदैन । यता प्रवद्र्धकले पनि स्वपुँजी थप्न गाह्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युतका लागि ऋण र स्वपुँजी अनुपात ८५ र १५ प्रतिशत गर्ने सर्कुलर गर्नुपर्छ ।
यसो नगर्ने हो भने जलविद्युतमा थप लगानी हुने सम्भावना छैन । कि सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्नुपर्यो । बैंकहरूले पनि अबको ३ वर्षसम्म आधार ब्याजमा ऋण दिनुपर्यो वा राष्ट्र बैंकले ८–९ प्रतिशतमा ब्याज लक गर्नुपर्यो । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन अवधि (आरसिओडी) को म्याद बिनासर्त बढाइदिनुपर्छ ।
सरकारले विगतदेखि भन्दै आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान र पोस्टेड विद्युत खरिद दर दिन कन्जुस्याइँ गर्नु भएन । यी उपायबाट निर्माणाधीन आयोजना जोगाउन सकियो भने थप लगानी आउने सम्भावना रहन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा दुर्घटना भयो भने यसले सर्वसाधारणदेखि बैंक, रोजगारका क्षेत्र र सिंगो अर्थव्यवस्था तहसनहस बनाउँछ ।
सरकारले काम गर भने पनि स्थानीयले दिएनन्
आत्माराम घिमिरे, प्रबन्ध निर्देशक, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी
दोर्दी कोरिडोरमा अहिले ४ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि सबै आयोजनाको काम ठप्प छ । लकडाउनको केही दिनपछि सरकारले काम सुचारु गर्न अनुमति दियो । तर, स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।
५४ मेगावाटको सुदर दोर्दी ‘ख’ ले निर्माण सुचारु गराउने प्रयास गर्यो । केही दिन काम भएपछि फेरि रोकिएको छ । हाम्रो २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ पनि लकडाउनकै दिनदेखि बन्द छ । स्थानीय अवरोधले हामीले काम गर्न पाएका छैनौं । सरकारको घोषणापछि गाउँपालिका र वडा कार्यालयसँग समन्वय भयो ।
गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री आयात र काम सुचारु गर्न दिने सहमति जनायो । तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले काम सुचारु गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भनेर दिएनन् । हामीले बाह्य व्यक्ति प्रवेश हुन नदिई त्यहीँका कामदारबाट काम गर्ने प्रस्ताव राख्यौं तर सफल भएन । हाम्रो काम विद्युतगृहभित्र मात्रै हो । गाउँलेसँग सम्पर्क नै हुँदैन ।
यही कुरा गाउँलेलाई बुझाउने प्रयास गरियो । तर, उनीहरू मानेनन् । स्थानीयबाटै विरोध भएको हुँदा जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि भएन । अहिले २ सय कामदार आयोजनास्थलमा निस्क्रिय बसेका छन् । काम नभए पनि कर्मचारीको तलब र बैंकको ब्याज नदिई हुँदैन । आयोजनाबाट चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका छ । अब त्यो सम्भावना टर्यो । यो समस्या १२ मेगावाटको दोर्दी–१ र २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाले समेत झेलिरहेका छन् ।
घर फर्केका कामदार फर्काउने चिन्ता छ
हिमप्रसाद पाठक, अध्यक्ष, साहस ऊर्जा कम्पनी
कोभिड–१९ को प्रभाव ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसीमा नझेल्ने कुरै भएन । आयोजनास्थलमा करिब ८ सय कामदार कार्यरत थिए । लकडाउनपछि धेरै त घर गइसके । भएकाले पनि बसेरै दिन काटिरहेका छन् । सरकारले काम सुरु गर्न अनुमति त दियो । तर, काम गर्ने वातावरण बनेन ।
सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सकिएको छैन । अब घर पुगेका कामदार कसरी फर्काउने अर्को चिन्ता छ ? केहीको काम सुचारु गर्ने वातावरण मिले पनि अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । काम नहुँदा लागत बढ्ने तथा विद्युत उत्पादन अवधि धकेलिने पक्का भयो । निर्माण सामग्री उत्पादन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन गर्नु अवको चुनौती हो ।
आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न कठिनाई भए पनि विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि जलविद्युत् सुरक्षित व्यावसाय हुने अनुभूत गरेको छु । कच्चा पर्दाथ अभावले सबै उद्योगधन्दा ठप्प छन् । तर, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले नियमित विद्युत उत्पादन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । उत्पादन सुरु भइसकेका आयोजनालाई ठूलो समस्या नहोला
दुई सय कामदार निस्क्रिय बसेका छन्
पुष्प चित्रकार, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिगाड हाइड्रो पावर कम्पनी
बझाङको कालंगा बेसिनमा एउटै समूहले साढे ६४ मेगावाटका ३ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण भइरहेका ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंगा गाड, १५.३३ मेगावाटको कालंगा गाड र १०.७ मेगावाटको सानी गाडमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । लकडाउनपछि यी आयोजनाको निर्माण आंशिक प्रभावित भएको छ ।
३ आयोजनामा १४ सय कामदार कार्यरत थिए । लकडाउनपछि ९ सय घर फर्किए । आयोजनास्थलमा भएकामध्ये पनि करिब ३ सयले काम गरिरहेका छन् । काम छ तर २ सय कामदार निस्क्रिय बसेका छन् ।
लकडाउनपछि स्थानीयले ३ वटै आयोजनाको काममा अवरोध गरेका थिए । अहिले काम अवरुद्ध भए बर्खामा बाढीले क्षति पुर्याउने भन्दै सम्झाएपछि सुचारु गर्न दिए । सबै आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा मात्र काम भइरहेको छ । भण्डारण गरिएको निर्माण सामाग्री सकिँदै गएकाले काम प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । निर्माण सामग्री आयात गर्न सवारीको पास लिन निकै सकस भयो । केही सवारीको पास लिएका छौं । पास लिन धेरै भनसुन गर्नु परेको छ । राजनितिक पहुँच हुनेहरूले सहजै पास पाए पनि जलविद्युतका लागि सहज छैन ।
सुरुङको काम नियमित गर्न विस्फोटक पदार्थको अभाव हुन थालेको छ । भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा लकडाउनपछि रोकिएको छ । बैशाख अन्त्यबाट लकडाउन खुले पनि पूर्ण गतिमा काम सुचारु गर्न सक्ने अवस्था छैन । घर पुगेका कामदार फर्काउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । उता सरकारले लकडाउनमा पनि कर्मचारीको तलब दिनु भनेको छ । पूर्णरूपमा आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न नपाउँदा आयोजनाको लागत थपिँदैछ ।
काममा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छ
मोहनविक्रम कार्की, कार्यकारी निर्देशक, सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी
मेरो नेतृत्वमा इलाममा ९.६ मेगावाटको सुपर माई ‘ए’ र ३ मेगावाटको सुपर माई क्यासकेड निर्माणाधीन छन् । दुवै आयोजना चालू वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । लकडाउनपछि पनि दुवै आयोजनाको काम चलिरहेको छ । निर्माण जारी राख्न हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समन्वयनका लागि पहल गर्यौं । ऊर्जाले गृह मन्त्रालय र गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निर्माण सामग्री ढुवानीको पास उपलब्ध गरायो ।
पास लिएकाले ढुवानीमा समस्या छैन । अहिलेसम्म १० पटकसम्म सिमेन्ट र डण्डी आयात भएको छ । हामीलाई इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारबाट सहयोग भएकाले निर्माण जारी राख्न कुनै अवरोध छैन । अन्य जिल्लामा काम सुचारु गर्न कठिनाई भएको सुनिएको छ । जिल्ला प्रशासन र स्थानीयले सहयोग गर्ने हो भने सबै आयोजनाको काम सुचारु गर्न सकिन्छ ।
बैशाख अन्त्यदेखि सुपर माई ‘ए’बाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तालिका छ । निर्माण नरोकिएकाले लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना बढेको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिक बोलाएर परीक्षण गर्न बरु समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । सुपर माई क्यासकेडबाट पनि जेठदेखि उत्पादन सुरु गर्ने तालिका छ । तर, इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण भारतमा रोकिएकाले केही ढिलाई हुन्छ कि ! आधा उपकरण आइसके । सरकारले हाम्रा आयोजनामा जस्तै अन्यमा पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।